Ungayifaka kanjani i-Google Tag Manager ne-Universal Analytics | Martech Zone
Ungayifaka kanjani i-Google Tag Manager ne-Universal Analytics
NgeSonto, Okthoba 30, 2016 NgoMsombuluko, Disemba 7, 2020 Douglas Karr
Besilokhu siguqulela amaklayenti ku-Google Tag Manager muva nje. Uma ungakezwa ngokuphathwa kwamathegi okwamanje, sibhale i-athikili ejulile, Kuyini ukuphathwa kwamathegi? - Ngingakukhuthaza ukuthi ufunde ngalo.
Ithegi amazwibela ekhodi athumela imininingwane kumuntu wesithathu, njengeGoogle. Uma ungasebenzisi isixazululo sokuphathwa kwamathegi njenge-Tag Manager, udinga ukwengeza la mazwibela ekhodi ngqo kumafayili akuwebhusayithi yakho noma kuhlelo lokusebenza lweselula. Uhlolojikelele lwe-Google Tag Manager
Ngaphandle kwezinzuzo zokuphathwa kwamathegi, i-Google Tag Manager inokusekelwa okwendabuko kwezinhlelo zokusebenza ezifana ne-Google Analytics kanye nokuthi uzofuna ukusizakala. Ngoba i-ejensi yethu isebenza kancane kumasu wokuqukethwe wamakhasimende ethu, silungiselela i-GTM kuwo wonke amaklayenti ethu. Nge-Google Tag Manager ne-Universal Analytics, singakwazi ukumisa imininingwane eyengeziwe ngamaqoqo wokuqukethwe we-Google Analytics ngaphandle kokuhlela ikhodi eyinhloko kumasayithi amaklayenti ethu. Ukulungiselela laba ababili ukuthi basebenze omunye nomunye akuyona eyenhliziyo encane, noma kunjalo, ngakho-ke ngifuna ukukubhalela.
Ngizobhala i-athikili ezayo yokulungiselela Ukuqoqwa kokuqukethwe nge-Google Tag Manager, kepha nge-athikili yanamuhla, nginezinjongo ezi-3:
Ungayifaka kanjani i-Google Tag Manager kuSayithi lakho (ngeminye imininingwane ye-WordPress engeziwe).
Ungangeza kanjani umsebenzisi kusuka ku-Agency yakho ukuze bakwazi ukuphatha i-Google Tag Manager.
Ungayisetha kanjani i-Google Universal Analytics ngaphakathi kwe-Google Tag Manager.
Le ndatshana ayibhalelwanga wena kuphela, empeleni igxathu negxathu kumakhasimende ethu. Kuzosivumela ukuthi sibaphathe i-GTM futhi siqhubeke nokwenza ngcono ukuthi imibhalo yangaphandle ilayishwa kanjani futhi ithuthukise nokubika kwabo kwe-Google Analytics.
Ungayifaka kanjani i-Google Tag Manager
Usebenzisa ukungena kwakho ngemvume kwe-Google Analytics, uzokubona lokho Isiphathi Somaka we-Google manje inketho kwimenyu eyinhloko, chofoza nje Ngena ngemvume:
Uma ungakaze usethe i-akhawunti ye-Google Tag Manager ngaphambili, kunesilekeleli esihle sokukuhambisa ngokusetha i-akhawunti yakho yokuqala nesiqukathi. Uma ungayiqondi i-verbiage engiyisebenzisayo, qiniseka ukuthi ubuke ividiyo kulokhu okuthunyelwe okukuhambayo!
Okokuqala, qamba i-akhawunti yakho. Ngokuvamile, uzokuqamba ngemuva kwenkampani noma ukwahlukana kwakho ukuze ukwazi ukuthola nokuphatha isayithi ngayinye kanye nezinhlelo zokusebenza ongahle ufakelwe zona i-Google Tag Manager.
Manje njengoba i-akhawunti yakho isisethiwe, udinga ukusetha eyakho yokuqala isitsha.
Lapho uchofoza ukudala, uzocelwa ukuthi uvumelane Nemigomo Yesevisi. Lapho usuvumile, uzonikezwa imibhalo emibili ongayifaka kusayithi lakho:
Naka lapho uwafaka khona lawa ma-tag, kubaluleke kakhulu ekuziphatheni kwanoma imaphi amathegi ozowaphatha ngaphakathi kwe-Google Tag Manager ngokuzayo!
Usebenzisa i-WordPress? Ngincoma kakhulu ifayili le- I-Duracelltomi Google Tag Manager WordPress Plugin. Lapho silungiselela Amaqoqo Okuqukethwe ku-Google Analytics, le-plugin inika amandla izici ezinokukhetha okwakhelwe ngaphakathi okuzokusindisa osizini oluningi!
Uma ulungiselela i-GTM usebenzisa i-plugin yomuntu wesithathu noma ukuhlanganiswa, uvame ukucelwa eyakho I-ID yokuqukethwe. Ngiqhubekele phambili ngakujikeleza lokho kusikrini esingezansi. Ungakhathazeki ngokuyibhala phansi noma ukuyikhohlwa, i-GTM yenza ukuthole kukuhle futhi kube lula ku-akhawunti yakho ye-GTM.
Ngabe imibhalo yakho noma i-plugin ilayishiwe? Kuyesabeka! I-Google Tag Manager ifakiwe kusayithi lakho!
Ungayinikeza Kanjani I-ejensi Yakho Ukufinyelela ku-Google Tag Manager
Uma imiyalo engenhla ibinzima kakhulu, empeleni ungagxumela ngqo ekunikezeni ukufinyelela ku-ejensi yakho. Mane uvale iwizard bese uqhafaza u-Admin kwimenyu yesibili ekhasini:
Uzofuna ukuchofoza Ukuphathwa Komsebenzisi bese wengeza i-ejensi yakho:
[box type = "warning" align = "aligncenter" class = "" width = "80%”] Uzoqaphela ukuthi nginikeza konke ukufinyelela ngalo msebenzisi. Ungahle uthande ukuphatha ukufinyelela kwe-ejensi yakho ngokuhlukile. Ngokuvamile, uzongeza i-ejensi yakho njengoMsebenzisi bese ubanikeza amandla okuthi Dala kepha ungashicileli. Ungahle ufune ukugcina ukulawula kwezinguquko zethegi yokushicilela. [/ Box]
Manje i-ejensi yakho ingafinyelela isiza sakho ngaphakathi kwe-akhawunti yabo ye-Google Tag Manager. Le ndlela engcono kakhulu bese ubanikeza ngemininingwane yakho yomsebenzisi!
Ungayisetha kanjani i-Google Universal Analytics ngaphakathi kwe-Google Tag Manager
Noma i-GTM ifakwe kahle kusayithi lakho kuleli qophelo, empeleni ayenzi lutho uze ushicilele umaki wakho wokuqala. Sizokwenza lo maki wokuqala Izibalo Zomhlaba Wonke. Chofoza Faka ithegi entsha ku-Workspace:
Chofoza kusigaba sethegi futhi uzokwaziswa ngokukhethwa kwamathegi, uzofuna ukukhetha Izibalo Zomhlaba Wonke:
Uzodinga ukuthola ikhodi yakho ye-UA-XXXXX-X kusuka kuskripthi sakho se-Google Analytics esivele isendaweni yakho bese uyifaka esigabeni esifanele. Ungachofozi ukugcina okwamanje! Kufanele sitshele i-GTM lapho ufuna ukudubula leyo thegi!
Futhi-ke, sifuna umaki uvuthe njalo lapho umuntu ebuka ikhasi kusayithi lakho:
Manje usungabuyekeza izilungiselelo zethegi yakho:
Chofoza ukulondoloza futhi uzobona isifinyezo sezinguquko ozenzile. Khumbula ukuthi umaki awukashicilelwa kusayithi lakho - lokho kuyisici esihle se-GTM. Ungenza izinguquko eziningi futhi uqinisekise zonke izilungiselelo ngaphambi kokuthatha isinqumo sokushicilela ushintsho bukhoma kusayithi lakho:
Manje umaki wethu usulungiswe kahle, sesingawushicilela kusayithi lethu! Chofoza Shicilela futhi uzocelwa ukuthi ubhale phansi ushintsho nokuthi wenzeni. Lokhu kusiza kakhulu uma unabaphathi abaningi nabalingani be-ejensi abasebenza kusayithi lakho.
[box type = "warning" align = "aligncenter" class = "" width = "80%"] Ngaphambi kokushicilela izinguquko zethegi yakho kusayithi lakho, qiniseka ukuthi susa noma imiphi imibhalo yangaphambilini ye-Google Analytics ngaphakathi kwesayithi lakho! Uma ungakwenzi, uzobona ukuthambekela okunzima nezinkinga nge analytics ukubika. [/ ibhokisi]
Ukuqhuma! Uchofoze ngokuchofoza ukushicilela futhi inguqulo igcinwa ngemininingwane yokuhlelwa kwamathegi. I-Universal Analytics manje isiyasebenza kusayithi lakho.
Siyakuhalalisela, umphathi we-Google Tag ubukhoma kusayithi lakho nge-Universal Analytics elungiselelwe futhi yashicilelwa njengomaki wakho wokuqala!
Tags: engeza ukufinyelela komsebenzisiI-google analyticsithegi ye-googleumphathi we-google tagumphathi we-google tag engeza umsebenzisiisitsha semenenja yamathegi we-googlei-google tag manager triggerizibalo ze-google universalgtmgtm isitshaindlelafaka umphathi we-google tagukubukwa kwamakhasiukuphathwa kwamathegiumphathi wethegiqalisa ukubukwa kwamakhasiizibalo zomhlaba wonke
Ngabe Sisadinga Izinhlobo?
Kusetshenziswa ukujwayelekile kweGarageBand ukulungisa okokufaka kwakho komsindo okuphansi
Ngo-Apr 25, i-2017 ku-2: i-34 PM
Uyi-smart fella wangempela - NGISHO - ukuhlakanipha okuhle 🙂 Lo mbhalo uphelele - yilokho ebengikudinga ukusebenzisa i-GTM. Kwazise isibhamu sesikrini
Ngo-Apr 25, i-2017 ku-2: i-38 PM